LUUQADDA KLAX - Sawir Qaadeynta Diyaaradda Los Angeles Intl Airport FSX & P3D - Rikoooo
KLAX - Sawir Qaade Khadka Duulimaadka ee Magaalada Los Angeles FSX & P3D
downloads 46 146
Muuqaalkan Sawirka dhabta ah waa dib u dhis buuxa oo loogu talagalay FSX/P3D Gegada diyaaradaha ee tooska ah ee 'KLAX Airport' iyadoo la adeegsanayo nooca ugu dambeeyay ee ADE (v01.50), Google SkecthUp 8, & Qalabka muuqaalka muuqaalka SBuilderX.
Tani muuqaal cusub KLAX, Version 3.0 ka mid ah dhismayaasha cusub ee terminal la resized iyo dib uqaabaynta in aad eegto more macquul ah. Waxaan ku daray nalalka terminal, (ma laambadihii habeenkii iftiin weli), geedo cusub, baabuurta si garaashyada la dhigto,
dhulka baabuurta isticmaalka taxiway go'an, iyo dhowr faahfaahin kale oo fiican in kor loogu qaado waayo-aragnimo KLAX ah.
faahfaahin kale ka mid yihiin New Tom Bradley International Terminal, dhismayaasha ku yaal W.Cenury Blvd, dhibco la dhigto 9 Airbus A380, iyo Photo qaabab dhulka Real. The runways iyo macawiso Garoonka ayaa lagu toosiyaa dhigma sawirka dayax-Google & Yahoo.
Dejinta muuqaalka muuqaalka oo isku dhawaaqaya gudaha FSX/P3D. Si aad u aado garoonka diyaaradaha KLAX waa inaad ku qortaa KLAX duurka "code Airport" ka Tababaraha duulimaadka aad
KSAN San Diego Sawirka Sawirka dhabta ah FSX & P3D 3.0